राष्ट्रिय खबर – SawalNepal
आज झापामा दुर्घटनामा गयो एकको ज्यान
झापा । अर्जुनधारा नगरपालिका १ स्थित मदनपुरमा मंगलबार दिउँसो ट्याक्टरले किचेर एक युवाको मृत्यु भएको छ । साधुटारदेखि मदनपुरतर्फ आइरहेको मे. १ त ५००६ नम्बरको ट्याक्टरले किचेर स्थानीय अर्जुन प्याकुरेलको ज्यान गएको हो । १९ वर्षीय उनको घटनास्थलमै ज्यान गएको बताइएको छ । अहिले घटनाको मुचुल्का उठाएर शव पोस्टमार्टमका लागि मेची अञ्चल
कुलमान घिसिङले किन दिए झुण्डिएर मर्ने चेतावनी
काठमाण्डु, ७ जेठ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्ने चेतावनी दिएका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्र भ्रष्टाचार भए/नभएको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानवीन समिति गठन गरिएको पनि स्पष्ट पारे । मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले डेडिकेटेड
पाँचथरमा ९ जनाको सामुहिक हत्या भएको स्थल नजिकै भेटिए झुण्डिएको अवस्थामा एक ब्याक्ति
पाँचथर – मिक्लाजुङ गाउँपालिका– ३ को आरुबाेटेमा ९ जनाको विभत्स हत्या गरिएको घटनास्थल नजिकै एकजना युवकको शव झुण्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिका–८ का मानबहादुर माखिमको शव झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी चौकी रविका प्रहरी निरीक्षक तेजनारायण यादवले वताउनुभयो । माखिम सोमबार राति विभत्स हत्या गरिएका बमबहादुर फियाकको ज्वाइँ रहेको मिक्लाजुङ
कारागारमा हुनुपर्ने कैदी होटलमा महिलासंग भेटिएपछि….(भिडियो)
नवराज छत्कुली धादिङ, जेठ ७ । कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहर भई कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई उपचार गराउनबाहेक अरु अवस्थामा कारागारबाट बाहिरिन छुट हुँदैन । तर धादिङ कारागारका एक कैदी भने खुलमखुला होटलमा मोजमस्ती गरिरहेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यसले कारागारको सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । उत्तरी धादिङको रुवीभ्याली गाउँपालिका–४
यस्तो विभत्स र दर्दनाक छ पाँचथरमा गरिएको ९ जनाको हत्या स्थल
पाँचथर, ७ जेठ । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३, आरुबोटेमा दुई परिवारका ९ जनाको विभत्स हत्या गरिएको स्थल सानो मुटुले हेर्न नसकिने खालको छ । ठूलादेखि बालबालिका समेत कसैलाई बाँकी नराखिएको उक्त हत्यास्थलमा रगतको खोला बगेको देखिन्छ । प्रहरीले हत्या गरिएका सबैको सनाखत गरिसकेको छ । अहिले गाउँले, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय जनप्रतिनिधि घटनास्थलमै छन् । मानिसको अनुहारमा
पाँचथर हत्याकाण्डमा संलग्न खोज्न शुरु सबै नाँकामा ब्यापक प्रहरी परिचालन
इटहरीः पाँचथर हत्याकाण्डका दोषी नउम्कियोस भन्नका लागि नेपाल प्रहरीले पूर्वी नाकालाई कडाइ बनाएको बताएको छ । प्रदेश एकका डिआइजी केदार रिजालले एसपी शरदकुमार खत्रीको नेतृत्वमा विशेष टोली परिचाल गरिसकेको प्रदेश पोर्टललाई जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार ९ जनाको ज्यान लिने गरी भएको उक्त घटनालाई विशेष रूपमा लिँदै सुरक्षा अधिकारीहरूले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान थालेकाे
पाँचथरमा भएको सामुहिक हत्याबारे प्रजिअ र गाँउपालिकाको अध्यक्षले यसो भने
पाँचथर । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३ आरुबोटेमा सोमबार राति भएको विभत्स घटनामा ९ जनाको हत्या भएको छ । आरुबोटे ३ को वडा कार्यालय छेउँमा भएको उक्त घटना मा भएको उक्त घटनामा धनराज शेर्माको ५ जनाको परिवार र मनकुमार फियाकको ४ जनाको परिवारको हत्या भएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुरारी वस्तीले घटनास्थलमा पुग्न चार
पाँचथरमा २ परिवारका ९ जनाको विभत्स हत्या, मृतक सबैको पहिचान खुल्यो
पाँचथर – पाँचथरमा २ परिवारको ९ जनाको हत्या भएको छ । एक बालिका घाइते भएकी छिन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३ को आरुबाटेमा एक परिवारको ५ जना र अर्को परिवारको ४ जनाको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक अनिल पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ । घटनास्थलमा रहेकी लघु उद्यम प्रशिक्षक अर्चना गुरुङका अनुसार सोमबार राति
पाँचथर । पाँचथरमा ९ जनाको हत्या भएको छ । जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका ३, आरुबोटे भन्ने स्थानमा दुई परिवारका ९ जनाको हत्या भएको हो ।१ बालिका घाइते छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक अनील पौडेलले २ परिवारका ९ जनाको हत्याको जानकारी पाएपछि प्रहरी घटनास्थल जान लागेको जानकारी दिए । १ बालिका
७ जेठ, पाँचथर । पाँचथरमा ९ जनाको विभत्स हत्या भएको छ । जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका-३, आरुबोटे भन्ने स्थानमा दुई परिवारका ९ जनाको हत्या भएको हो । १ बालिका घाइते छिन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक अनील पौडेलले एक परिवारको पाँच र अर्को परिवारको ४ गरी ९ जनाको हत्या गरिएको पुष्टि गरे । प्रहरी